ကျွန်ုပ်၏ Instagram အကောင့်ကိုမည်သို့ဖျက်ပစ်ရမည်သို့မဟုတ်ခေတ္တပိတ်ခြင်း Gadget သတင်း
Instagram သည်လူကြိုက်အများဆုံးလူမှုကွန်ယက်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်လာသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း။ ၎င်း၏တိုးတက်မှုသည်မိုးလေ ၀ သဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပြီးကမ္ဘာပေါ်တွင်ဒုတိယမြောက်အများဆုံးအသုံးပြုသည့်လူမှုကွန်ယက်ဖြစ်သည်။ အရင်ကအဖြစ်အပျက်တွေမှာမင်းတို့အထူးသဖြင့်အဲဒါကိုပိုပြီးရယူဖို့နည်းလမ်းတွေအကြောင်းပြောခဲ့တယ်။ ဒီကွန်ယက်တွင်နောက်လိုက်များရရှိရန်နည်းလမ်းဖြစ်သည်.
လူကြိုက်များသော်ငြားသုံးစွဲသူများအားလုံးသည် Instagram ကိုတူညီစွာမကျေနပ်ကြပါ။ လျှောက်လွှာကိုမသုံးချင်သောသူများရှိသည်၊ ထို့ကြောင့်သူတို့၏အကောင့်ကိုဖျက်ပစ်လိုက်သည်။ မင်းလည်းဖြစ်နိုင်တယ် သင်၏လူမှုရေးကွန်ယက်တွင်သင်၏အကောင့်ကိုဖျက်ပစ်ရန်သင်စဉ်းစားနေသည်။ ဒါပေမယ့်သင်ဒီလိုလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာတိကျတဲ့နည်းလမ်းကိုမသိပါဘူး။ အောက်မှာပြထားတဲ့အတိုင်းရှင်းပြပါ့မယ်။
Instagram ၏ဖြစ်ရပ်တွင်ရွေးချယ်စရာနှစ်ခုရှိသည်။ တစ်ဖက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အကောင့်ကိုရပ်ဆိုင်းနိုင်သည်, အရာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပရိုဖိုင်းကိုလူမှုကွန်ယက်တွင်ဖျက်ပစ်သည်မဟုတ်, ငါတို့နောက်တစ်ကြိမ်ထပ်မံဝင်မဟုတ်လျှင်တက်ကြွသို့မဟုတ်မြင်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ ၎င်းသည်သင်၌ပါရှိသောအချက်အလက်များကိုသင်မဆုံးရှုံးလိုပါကသို့မဟုတ်၎င်းကိုအသုံးပြုခြင်းမှခဏအနားယူလိုပါကသင်အသုံးပြုနိုင်သောရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
သင်လိုချင်တာကသင်၏ Instagram အကောင့်ကိုဖျက်ရန်ဖြစ်သည်ဆိုလိုတာကပရိုဖိုင်းနဲ့ပါ ၀ င်တဲ့အကြောင်းအရာအားလုံးကိုလုံးဝပယ်ဖျက်လိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်သူတို့ကိုသင်ဘယ်တော့မှပြန်မရတော့ဘူး ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်မလုပ်မိဖို့ငါတို့စဉ်းစားရမယ်။ ထို့အပြင်အချက်အလက်များအားလုံးဆုံးရှုံးခြင်းသည်လူမှုကွန်ယက်တွင်တင်ထားသောအရာအားလုံးကိုမိတ္တူကူးသင့်သည်ဟုဆိုလိုသည်။ ဒါကြောင့်ငါတို့ကအားလုံးကို download လုပ်ပါရန်ရှိသည်, ဗွီဒီယိုတွေအပါအ ၀ င်.
ရရှိနိုင်သည့်နောက်ရွေးစရာတစ်ခု၊ သင်၏ဖုန်းမှလျှောက်လွှာကိုဖယ်ရှားရန်ဖြစ်သည်။ သင်လိုချင်ပါက၎င်းသည်ခဏသုံးခြင်းအားရပ်တန့်ရန်ဖြစ်သည်။ သို့မှသာသင်သည်လူမှုကွန်ယက်တွင်တစ်နေ့လုံးမနေနိုင်တော့ပါ။ ၎င်းသည်၎င်းကိုအသုံးပြုခြင်းမှအနားယူရန်ကျွန်ုပ်တို့အားကူညီနိုင်သည်။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောရွေးချယ်မှုတစ်ခုစီအကြောင်းပိုမိုရှင်းပြပါ။
1 သင်၏ Instagram အကောင့်ကိုဖျက်ပါ
သင်၏ Instagram အကောင့်ကိုဖျက်ပါ
ပထမဆုံးသင်ခန်းစာမှာ tutorial ကိုသူ့နာမည်ပေးတဲ့ option ကိုပဲအာရုံစိုက်တယ် သင်၏ Instagram အကောင့်ကိုဖျက်ပစ်သည်။ ကျနော်တို့ရှင်းပြခဲ့သကဲ့သို့, ဒီကပိုအစွန်းရောက်ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါတို့တင်လိုက်သောအကြောင်းအရာများအားလုံးနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ပရိုဖိုင်းနှင့်အတူ၊ လူမှုကွန်ယက်မှထာဝရပျောက်ကွယ်သွားလိမ့်မည်ဟု၎င်းကယူဆသည်။ လူမှုကွန်ယက်တွင်ဓာတ်ပုံများစွာတင်ထားပါကအချို့သူများအတွက်မလွယ်ကူပါ။
Instagram အကောင့်ကိုအပြီးတိုင်ဖျက်ရန် လူမှုကွန်ယက်ကိုယ်နှိုက်ကဒီအတွက်ကိရိယာတစ်ခုပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အကောင့်နှင့်ပတ်သက်သောအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကိုပြီးအောင်လုပ်ရန်ခြေလှမ်းများစွာကိုလိုက်နာနိုင်သည်။ သင်လုပ်နိုင်သည် ဒီ link ကိုရယူပါ.
ဒီမှာ session တစ်ခုမဖွင့်လျှင်တစ်ခုတည်းသောအကောင့်ကိုဖျက်ရန်ဖြစ်သည်။ Instagram ကများသောအားဖြင့်သင်ဘာကြောင့်ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ချတာလဲလို့မေးတတ်တယ်။ သင်ဆန္ဒရှိလျှင်အကြောင်းပြချက်ပေးနိုင်သည်၊ မည်သည့်ကိစ္စတွင်မဆိုမဖြစ်မနေလိုအပ်သည်။ ဤရိုးရှင်းသောအဆင့်ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်လူမှုကွန်ယက်တစ်ခုဖြစ်သောအမြဲတမ်းတစ်ခုဖြစ်သောကျွန်ုပ်တို့၏အကောင့်ကိုဖျက်သိမ်းပြီးဖြစ်သည်။
ဆိုလိုသည်မှာသင်သည် login လုပ်ရန်ကြိုးစားလျှင်အသုံးပြုသူမရှိတော့ကြောင်းသင်ပြောလိမ့်မည်။ ဒါကြောင့်အသုံးပြုသူအမည်အခမဲ့ဖြစ်သည်ဆိုလိုသည်မှာလူမှုကွန်ယက်တွင်မှတ်ပုံတင်သည့်အခါအခြားသူက၎င်းကိုသုံးနိုင်သည်။
အကယ်၍ ယခင်ရွေးချယ်မှုသည်အစွန်းရောက်ပါက Instagram အကောင့်အားရပ်တန့်ရန်အခြားနည်းလမ်းတစ်ခုကိုကျွန်ုပ်တို့အားခွင့်ပြုသည်။ အဲဒါက သင်၏အကောင့်ကိုခေတ္တပိတ်ခြင်းသို့မဟုတ်ပိတ်ခြင်းဟုခေါ်သောရွေးစရာ။ ဤနည်းလမ်းတွင်လူမှုကွန်ယက်ပေါ်ရှိသင်၏ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ကိုဖျက်ပစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ၊ အခြားအသုံးပြုသူများမြင်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ၊ သို့သော်သင်၌တင်ထားသောအကြောင်းအရာများ၊ ဓာတ်ပုံများသို့မဟုတ်ဗွီဒီယိုများနှင့်မက်ဆေ့ခ်ျများမှာလူမှုရေးကွန်ယက်ပေါ်ရှိသင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်ကိုဖျက်ပစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ခပ်သိမ်းသောအချိန်၌ရှိလော့။
သင်သည်လူမှုကွန်ယက်ကိုငြီးငွေ့နေလျှင်၎င်းသည်ရွေးချယ်မှုကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်၊ သို့သော်မဝေးတော့သောအနာဂတ်ကာလ၌၎င်းကိုသင်ထပ်မံအသုံးပြုနိုင်သည်။ ဒီအခြေအနေမှာ သင်၏အကောင့်ကိုခေတ္တပိတ်ခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ သင် Instagram ကိုထပ်မံအသုံးပြုလိုသည့် အချိန်မှစ၍ သင်၏အကောင့်ထဲသို့ဝင်ရောက်ပြီးအရာအားလုံးပုံမှန်ပြန်ဖြစ်လာသည်။
ဤကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်လုပ်ရန်နည်းလမ်းနှစ်ခုရှိသည်။ သင်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်, သင်ဒီ link ကိုရိုက်ထည့်နိုင်သည်သင်၏အကောင့်၏လျှို့ဝှက်နံပါတ်ကိုရိုက်ထည့်ပြီးအကြောင်းပြချက် (optional) ပေးရန်လိုအပ်သည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဤအရာကိုသင်ယူနေရသနည်း အကောင့်ပိတ်ထားရန်ဆုံးဖြတ်ချက်။ ဤအဆင့်များဖြင့်သင် Instagram ကိုထပ်မံမဝင်မချင်းအကောင့်သည်မလှုပ်မရှားဖြစ်လာသည်။
၎င်းကိုပရိုဖိုင်းကိုတည်းဖြတ်ရန်ရွေးချယ်ခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်၊ သို့သော်အက်ပ်တွင်မဟုတ်ပါ ဒါပေမယ့်သင် browser (ဘရောက်ဆာ) သို့ဝင်ပါ။ လျှောက်လွှာတွင်ကျွန်ုပ်တို့အကောင့်ကိုခေတ္တပိတ်ထားနိုင်သည့်အခွင့်အရေးမရှိပါ။ ဒါကြောင့်ဒီကိစ္စမှာသင်၏ကွန်ပြူတာ (သို့) သင့်မိုဘိုင်းဖုန်းပေါ်တွင်ဘရောင်ဇာကိုအမြဲတမ်းဖွင့်ရန်လိုအပ်သည်။ ထပ်မံ၍ သင်ပြန်လည်ဝင်ရန်ဆုံးဖြတ်ချက်မချမှီအထိအကောင့်သည်မလှုပ်ဘဲနေလိမ့်မည်။ သင်ဤအရာကိုလုပ်သောအခါသင်၏အကြောင်းအရာများရှိနေတုန်းအားလုံးပုံမှန်အတိုင်းပြန်ဖြစ်လာမည်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ဒုတိယဆင်တူ option တစ်ခုInstagram ကိုခေတ္တရပ်တန့်လိုလျှင်သင်ယူနိုင်သည်။ သင်သည်လူမှုကွန်ယက်ကိုအလွန်အကျွံအသုံးပြုနေသည်ကိုသင်သတိပြုမိနိုင်သည်၊ သို့မဟုတ်၎င်းကိုခေတ္တရပ်တန့်လိုခြင်းသာဖြစ်သည်၊ သင်ဆက်လက်သုံးစွဲခြင်း၏အသုံးဝင်မှုကိုသင်မတွေ့သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
Instagram ကိုရယူရန်အသုံးအများဆုံးနည်းလမ်းမှာသင်၏လက်ကိုင်ဖုန်းမှဖြစ်သည်။ ဤကိစ္စတွင်သင်သည်သင်၏ဖုန်းမှလျှောက်လွှာကိုဖယ်ရှားရန်အတွက်အလောင်းအစားနိုင်သည်။ ဤနည်းအားဖြင့်သင်သည်သင်၏ပရိုဖိုင်းသို့မဟုတ်လျှောက်လွှာကိုမကြာခဏဝင်ရောက်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ Android ပေါ်ရှိအက်ပ်ကိုဖျက်ရန်နည်းလမ်းမှာလွယ်ကူသည်၊ အိုင်ကွန်ကိုနှိပ်ပြီးကိုင်ထားပြီးလျှင်အမှိုက်သို့ဆွဲတင်ရုံသာဖြစ်သည်။ သင်လိုချင်ပါက၎င်းပြင် Applications ထဲမှ application section တွင်လည်း၎င်းကိုသင်ဖျက်နိုင်သည်။
ဒါကြောင့်ခဏကြာပြီးမှသင်ပြန်ဝင်ချင်ရင် app ကိုပြန်ထည့်ပြီး log in လုပ်ပါ။ သင်၏ပရိုဖိုင်းသည်ယခင်ကဲ့သို့ဆက်လက်တည်ရှိမည်, သင်၏ဓာတ်ပုံများနှင့်မက်ဆေ့ခ်ျများအတူတူပင် site ပေါ်တွင်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ၎င်းသည်လူမှုရေးကွန်ရက်မှအခါအားလျော်စွာအနားယူလိုပါကထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ယေဘုယျ » လူမှုရေးကွန်ယက် » ကျွန်ုပ်၏ Instagram အကောင့်ကိုဘယ်လိုဖျက်ရမလဲ